I-FDA i-FDA i-Shampoo Silicone Bottles Travel Amabhubhu China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Amakethe Omkhulu: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Amabhodlela wePlastiki angenalutho wokuhamba,Ishubhu se-Squeeze yokuhamba,Ubufakazi bokuvuza Okuthungatha Ukuhamba Kwama-Toiletries
Home > Imikhiqizo > Amabhilidi Wokuhamba Esiliva > Ukuthwala Amafutha Okuhamba Akhasi > I-FDA i-FDA i-Shampoo Silicone Bottles Travel Amabhubhu
I-Model No.: T5
I-FDA Shampoo Tube Ibhodlela Lokuhamba Lobunandi Lase-FDA
Leli bhodlela lokuhamba elingasicone elinobungozi bebanga le-silicone materail, ngokuvumelana ne-FDA standard, ayinayo i-materail eyingozi njenge-BPA / PVC, ephephile engeyona into enobuthi. Izindleko zokuhamba zangasese eziqukathi zokuhamba zivule ukugeleza okulawulayo, ukulahleka kwe-zero. Izingxenye ezintathu zekhava lokuvuza, kanye ne-valve yokuvuza, qinisekisa ukuthi akukho ukuvuza okuketshezi. Amakabhodlela wokuhamba ahamba nge-caliber enkulu, egcwalisa kalula, usayizi omncane okulula ukuwuthwala. Amabhodlela okuphumula okuhamba ngamagagasi kanye ne-samll inkinobho ukugeza ubuso, i-quikly engaphezulu futhi uhlanze zonke izinhlobo zokushayela. 48ml & 78ml, elula futhi elula, ingafaka ishayela, i-gel, i-shampoo. Hlanza zonke izinhlobo zokushayela.
Amabhodlela wePlastiki angenalutho wokuhamba Ishubhu se-Squeeze yokuhamba Ubufakazi bokuvuza Okuthungatha Ukuhamba Kwama-Toiletries Amabhodlela amancane wePlastiki Wokuhamba Amabhodlela amakhulu okuhamba Amabhodlela wokuhamba angenalutho Ibhodlela leManzi lokuhamba Amabhodlela amancane amanzi okuhamba